Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Kiisaska cusub ee PTSD, Niyad-jabka iyo Qabatinka Soar Ilaa Omicron
Marka loo eego Tusaha Caafimaadka Dhimirka: 1 ka mid ah shaqaalaha Mareykanka 4 ayaa muujinaya calaamadaha PTSD, niyad-jabka ayaa kor u kacay 87%, iyo halista laqabsiga ragga ayaa kor u kacday 80% tan iyo Sebtembar.
Sida dadka Maraykanku ay naftooda ugu dhiirranayaan sannadka saddexaad ee nolosha faafa, caafimaadkooda maskaxeed ayaa gaadhay heerkii ugu hooseeyay abid, marka loo eego Tusaha Caafimaadka Dhimirka: Daabacaadda Shaqaalaha US. Gaar ahaan, PTSD, niyad-jabka iyo balwadda ayaa cirka isku shareertay iyadoo ay cirka isku sii shareerayaan kiisaska Omicron. Arrin naxdin leh 1 ka mid ah 4tii shaqaale Maraykan ah ayaa laga helay xanuunka walaaca ka dib (PTSD) - ilaa 54% saddexdii bilood ee la soo dhaafay iyo ilaa 136% marka la barbar dhigo cudurka ka hor. Niyad-jabka ayaa kor u kacaya - ilaa 87% ilaa dayrtii (63% wuu ka sarreeyaa ka hor COVID19).
Ragga ayaa muujinaya kor u kac weyn oo ah khatarta balwadda - ilaa 80% intii u dhaxaysay Sebtembar iyo Disembar 2021. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, niyad-jabka ragga ayaa kor u kacay 118%, walaaca bulshaduna waa 162%. Markaad si gaar ah u eegto ragga da'doodu tahay 40-59, walaaca guud ayaa kor u kacay 94%.
"Waxaan filaynaa in caafimaadka dhimirku hoos u dhaco agagaarka ciidaha; si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax sidan u wayn,” ayuu yidhi Mathew Mund, maamulaha guud, Total Brain. "Waxaan aragnaa walaac aad u dhib badan oo ku yimid welwelka caafimaadka dhimirka waqti uu Omicron bilaabay inuu qabsado qaranka; Waajibaadka tallaalka goobta shaqada waa la meelmariyey; waxaana si xawli ah ku socda ciidaha. Loo-shaqeeyayaashu waa inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan dhaawacyada goobta shaqada. Fahamka khataraha iyo cadaadiska ka iman kara shaqaalaha iyo sidii caadiga ahayd ee goobta shaqada looga doodi lahaa caafimaadka dhimirku waa tallaabooyinka ugu horreeya ee muhiimka ah."
Tusaha Caafimaadka Dhimirka: Daabacaadda Shaqaalaha Mareykanka, oo ay ku shaqeyso wadarta Maskaxda, kormeerka caafimaadka dhimirka iyo madal taageero, ayaa loo qeybiyay iyadoo lala kaashanayo Isbaheysiga Qaranka ee Isbaheysiga Iibsadaha Daryeelka Caafimaadka, Hal Mind at Work, iyo Ururka Siyaasadda HR iyo Siyaasaddeeda Caafimaadka Mareykanka Machadka.
Michael Thompson, Madaxweynaha Isbahaysiga Qaranka iyo Maamulaha Guud, ayaa faallo ka bixiyay, "Cudurka omicron-ka ayaa saameyn barbar socda ku yeeshay caafimaadka maskaxda ee shaqaalaheena. In kasta oo aan rajaynaynay in wixii ugu xumaa uu naga dambeeyay, loo-shaqeeyayaashu waxay rabi doonaan inay laba jibaaraan dadaallada lagu abuurayo jawi taageero iyadoo arrimaha ay abuureen masiibada ay sii socdaan.
Margaret Faso, oo ah agaasimaha, Cilmi-baarista Daryeelka Caafimaadka iyo Siyaasadda Ururka Siyaasadda HR, ayaa tiri, "Waa wax laga xumaado in fidinta degdega ah ee kala duwanaanshaha Omicron ay sii kordhisay hoos u dhaca caafimaadka habdhaqanka fasaxyada caadiga ah. Loo-shaqeeyayaasha waaweyni waxay sii wadaan inay si hagar la'aan ah u shaqeeyaan si ay u siiyaan shaqaalaha dabacsanaan iyo faa'iidooyin goobta shaqada oo kordhay, oo ay ku jiraan helitaanka adeegyada daryeelka caafimaadka. Hubanti la'aanta ku xeeran siyaasadaha federaalka ee COVID waxay ku kordhinaysaa walaaca laga dareemay goobta shaqada; si kastaba ha ahaatee, loo-shaqeeyayaashu waxay sii wadeen inay diiradda saaraan badbaadada iyo fayoobaanta shaqaalaha, iyada oo aan loo eegin waajibaadka ama siyaasadda federaalka. Waa rajadayada in marka kala duwanaanshaha Omicron uu sii xumaado, walbahaarka, niyad-jabka iyo welwelka shaqaalaha Ameerika ay sidoo kale hoos u dhacaan, iyo caafimaadka habdhaqanka ee la xidhiidha dhammaan dadka Maraykanka ah ayaa soo hagaagaya."
"Saamayntan joogtada ah ee caafimaadka maskaxda ee xoogga shaqada maanta waxay u baahan doontaa saameyn joogto ah iyo dadaal dhinaca loo shaqeeyayaasha," ayuu yiri Daryl Tol, madaxweyne ku xigeenka fulinta ee One Mind at Work. "Inta badan, waxaan raadinaa xalal sahlan ama kuwa gaaban oo lagu xalliyo dhibaatooyinka adag, si kastaba ha ahaatee waxaa cad in ay qaadan doonto shaqo u go'an, oo joogto ah si loo horumariyo barnaamijyada caafimaadka maskaxda ee shaqaalaha si miisaan leh."
Covid Caafimaadka Siyaasadda Research
Cudurka norovirus iyo cudurada caloosha iyo mindhicirka oo dilaaca...